Ebe nchekwa ihe onwe onye - IntoKildare
Ebe ọ bụla ị kpebiri ime njem, ebe obibi onwe onye na Kildare bụ nnukwu nhọrọ mgbe niile ma ọ bụrụ na ị na-achọ nnwere onwe nke ezumike na ịgagharị n'ike nke aka gị, ebe ị na-emikpu onwe gị na gburugburu ebe ị họọrọ.
Obodo Kildare dị egwu, obodo nta akụkọ ihe mere eme, ime obodo mara mma na ọdọ mmiri mara mma bụ ebe obibi mara mma nke na-eri onwe ya, nke pụtara na emebiela gị maka nhọrọ. Enwere ebe obibi ezumike nke onwe ya na Kildare ị nwere ike ịhọrọ. Site na ebe obibi okomoko n'ime ogige ụlọ elu, ka mma hideaways n'akụkụ osimiri, na azụ na okike ulo tọpụrụ n'ime ime obodo anyị.
Chọgharịa wee hụ ụdị nri onwe onye na-amasị gị!
mmefu ego okomoko Pet Friendly Ezigbo ezinụlọ Hotlọ nkwari akụ Spa Mmiri mmiri Ebe Agbamakwụkwọ Leslọ na Histlọ Akụkọ Mere Eme
13 nsonaazụ (s)
Ụlọ oriri na ọṅụṅụ Alensgrove
N'ịbụ nke dị n'ọnụ ụzọ Dublin n'ime obi North Kildare, Alensgrove na-etu ọnụ ụlọ dị jụụ nke nwere ụlọ ndị e ji nkume wuo na-anọdụ n'akụkụ mmiri nke Osimiri Liffey. Ma ị na-eme njem maka ezumike, […]
Ebe obibi nke nwere kpakpando anọ nwere nnukwu ọnọdụ maka ịgagharị mpaghara ndị gbara ya gburugburu.
Cliff na Lyons
Hotellọ nkwari akụ okomoko bi na nchịkọta pụrụ iche nke ụlọ ndị nwere uwe elu, gụnyere igwe nri na ebe nduru mbụ, n'ime ime Kildare.
Lavender Cottage bụ ọmarịcha ebe nzuzo zoro n'akụkụ mmiri Liffey. Ọkụ, na -anabata ma dị irè.
Stlọ ndị nwe ụlọ na Robertstown dị na-ele Grand Canal, na obodo dị jụụ nke Robertstown, Naas.
Solas Bhride (ìhè / ire ọkụ Brigid) bụ Ebe Ime Mmụọ nke Ndị Kraịst na-elekwasị anya n'ihe nketa nke St. Brigid.
Ebe obibi dị mkpụmkpụ nke nwere onwe ya na ụlọ ndozi dị afọ 150 emezigharịrị ọhụrụ n'akụkụ akụkụ Osimiri Barrow na Grand Canal.